أيوب 7 NAV - Hiob 7 ASCB
1“Asase so som nyɛ den mma onipa anaa?
Ne nkwa nna nte sɛ ɔpaani deɛ?
2Sɛdeɛ akoa ani gyina anwummerɛ sunsumma,
anaasɛ ɔpaani ho pere no nʼakatua ho no,
3saa ara na wɔatwa abosome hunu ato me hɔ,
ne anadwo a ɔhaw wɔ mu ama me.
4Sɛ meda a, medwene bisa sɛ, ‘Ɛberɛ bɛn na adeɛ bɛkye?’
Nanso anadwo twam nkakrankakra, na mepere kɔsi ahemadakye.
5Asonsono ne aporɔporɔ ahyɛ me honam ma,
me honam asɛe na ɛrefiri nsuo.
6“Me nna kɔ ntɛm sene ɔnwomfoɔ akurokurowa,
na ɛkɔ awieeɛ a anidasoɔ biara nni muo.
7Ao Onyankopɔn, kae sɛ me nkwanna te sɛ ahomeɛ;
na merennya anigyeɛ bio da.
8Ani a ɛhunu me seesei renhunu me bio;
mobɛhwehwɛ me, nanso na menni hɔ bio.
9Sɛdeɛ omununkum yera na ɛtu korɔ no,
saa ara na deɛ ɔkɔ damena mu no nsane mma bio.
10Ɔrensane mma ne fie da biara da;
nʼatenaeɛ renkae no bio.
11“Ɛno enti meremmua mʼano;
mɛfiri me honhom ahoyera mu akasa,
mɛfiri me kra ɔyea mu anwiinwii.
12Meyɛ ɛpo anaa aboa kɛseɛ a ɔwɔ ebunu mu anaa,
na mode me ahyɛ ɔwɛmfoɔ nsa yi?
13Sɛ medwene sɛ menya awerɛkyekyerɛ wɔ me mpa so,
na mʼakonwa adwodwo mʼanwiinwii ano a,
14ɛno mpo na wode adaeɛso yi me hu
na wode anisoadehunu hunahuna me,
15ɛno enti mepɛ akɔmfohyɛ ne owuo,
sene me onipadua yi.
16Memmu me nkwa; mentena ase afebɔɔ.
Monnyaa me; na me nna nka hwee.
17“Ɔdasani ne hwan a ne ho hia wo sei,
na wʼani ku ne ho,
18na wohwehwɛ ne mu anɔpa biara
na wosɔ no hwɛ ɛberɛ biara?
19Worenyi wʼani mfiri me so da,
anaasɛ worennyaa me ɛberɛ tiawa bi mpo anaa?
20Sɛ mayɛ bɔne a, ɛdeɛn na mayɛ woɔ,
Ao adasamma so wɛmfoɔ?
Adɛn enti na watu wʼani asi me soɔ?
Mayɛ adesoa ama wo anaa?
21Adɛn enti na wonkata me mmarato so
na womfa me bɔne nkyɛ me?
Ɛrenkyɛre biara, mɛda mfuturo mu.
Wobɛhwehwɛ me nanso na menni hɔ bio.”
ASCB : Hiob 7